Zvinotaridza kuti paine zvimwe zvikanganiso kuwana Apple Music kubva paPambaPod yakagadziridzwa kuita vhezheni 14.5 | IPhone nhau
Iko kunoratidzika kunge kune zvimwe zvipenga mukuwana Apple Music kubva paPambaPod yakagadziridzwa kuita vhezheni 14.5
Zvinotaridza kuti vamwe vashandisi vakagadzirisa yavo HomePod kune iyo nyowani software vhezheni 14.5 ivo vari kunetseka kuwana Siri kuti avaridzire rwiyo. Zvakafanana nekuti haigone kubatana neApple Music.
Kana kukanganisa uku kukasimbiswa, isu tine chokwadi chekuti Apple ichagadzirisa nekukurumidza nesoftware nyowani. Saka kana iwe uri mumwe wevashandisi vane nhamo vane dambudziko iri, usaore moyo kuti ichakurumidza kugadziriswa.
Vashandisi vakasiyana siyana vari kuoneka pane akasiyana masocial network vari kunyunyuta nezvedambudziko rakajairika: yavo HomePod haigone kuwana Apple Music mushure mekuvandudzwa kune itsva 14.5 software svondo rapfuura. Paunenge uchishandisa "Hei Siri" kuridza rwiyo kana muimbi, mubatsiri wega anogona kuita kunge asiri kuwana rwiyo irworwo muApple Music.
Aya matambudziko neApple Music pane iyo HomePod ajoina mamwe akafanana kubva mazuva mashoma apfuura. NeChipiri chesvondo rino, masevhisi akasiyana e ICloud zvaive zvisina basa kune vamwe vashandisi kwemaawa akati wandei. Vhiki rapfuura, zvimwe chete zvakaitika neTunes uye Apple Music.
Parizvino Apple haina kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vashandisi vakakwanisa kudzosera zvazvanga zviri kubva kufakitori yako HomePod uye dambudziko ragadziriswa.
Kana iwe uri mumwe weavo vanotambura nekanganiso iyi, unogona kugara uchizvigadzirisa nekutamba mimhanzi yaunoda zvakananga kubva kuApple Music application pane iPhone, uye uitambe kuburikidza nePodPod.
Dambudziko riripo chete kana iwe uchitaura Siri tamba rwiyo wakanangana nePambaPod. Apa ndipo apo chishandiso chisingakwanise kuwana iyo Apple Music application uye isingakwanise kuzadzisa iwo murairo.
Tichave takamirira chirevo kubva apuro, uye mhinduro yekukurumidza muchimiro chechigamba mushanduro nyowani yesoftware yechishandiso, inozogadzirisa dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Iko kunoratidzika kunge kune zvimwe zvipenga mukuwana Apple Music kubva paPambaPod yakagadziridzwa kuita vhezheni 14.5
Wanonoka. Izvi zvakaitika semhedzisiro yekuvhura ios 14.5.1 ye iphone, uye zvakakanganisa homepod kana apple tv. Zvakaitika pazuva 3. Nezuva rechina rakanga ratogadziriswa
Ini ndiri mumwe weavo vakabatwa nedambudziko. Pakukumbira chero redhiyo kana chimbo inoti hapana chinoenderana muApple Music. Ini ndichaedza kumisazve uye kushuma mhedzisiro pano.
AirTag vs Tile: ndeupi wavo anotora nguva shoma kuwana?
Otterbox inobatana neMagSafe accessories zve iPhone 12